တခါတုန်းက တက္ကသိုလ်မှာ… မောင်လပြည့် (တက္ကသိုလ် ဆယ်ရက်) PART I | PoemsCorner
တခါတုန်းက တက္ကသိုလ်မှာ… မောင်လပြည့် (တက္ကသိုလ် ဆယ်ရက်) PART I
တခါတုန်းက တက္ကသိုလ်မှာ… မောင်လပြည့် (တက္ကသိုလ် ဆယ်ရက်)
ခေတ်ပညာတတ် လူငယ်တစ်ဦးဆိုတိုင်း မလွဲမသွေ ဖြတ်သန်းရသော ပျော်စရာအချိန်လေး တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ဖူးကြပေမည်။ ထို ပျော်စရာအချိန်လေးသည် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘ၀ ၏နေ့ ရက်လေးများဖြစ်ပေသည်။ လူတစ်ယောက်အတွက် တက္ကသိုလ် တတ်ခွင့်ရသော အချိန် သည် ထိုသူ၏ ဘ၀တွင် အပျော်ဆုံး အချိန်လည်း ဖြစ်ပေမည်။
အပူပင်ကင်းသော ကျောင်းသား ဘ၀ ၊ သူငယ်ချင်းများ ၊ အတန်းဖော်များနှင့် စလိုက်ကြ နောက်လိုက်ကြ တကယ့်ကို ပျော်စရာပင်။ နောက်နောင် ဘယ်လိုမှ ပြန်မရနိုင်သော အချိန်အခါလေးများဖြစ်ပေသည်။
သို့ ဆိုလျှင် ကျွန်တော့်တွင်လည်း တက္ကသိုလ်နှင့် ပတ်သက်သော အဖြစ်အပျက်များ ၊ ဆွတ်ပျံ့ ကြည်နူးဖွယ်ရာများ ၊ တက်ကြွဖွယ်ရာများ ၊ စိတ်ပျက်အားငယ်ဖွယ်ရာများနှင့်ပြည့်နှက်လျက်ရှိပေသည်။
ဟိုး ယခင်ရှေးကတည်းက ပင် တက္ကသိုလ်နှင့်ပတ်သက်သော နောက်ခံ သီချင်းများ ၊ ရုပ်ရှင်များ ၊ ၀တ္တုများ ၊ ကဗျာများ က အင်းလျားကန်ကြီး တစ်ခု စာမျှ ပြည့်နှက်လျက်ရှီပေသည်။
ကျွန်တော် အရွယ်ရောက်သော် . (ဆရာ)မင်းလူ ၏ တက္ကသိုလ် နောက်ခံ အချစ်ဝတ္တုများက ခေတ်စားနေပြီ ။ မာလာဆောင်နှင့် ပတ်သက်သော သီချင်းများကလည်း ပျံ့ လွင့်နေပြီ ။ သို့ သော် အများစုက သမုဒယ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ တို့ ကိုသာ ရည်ညွှန်းကြသည်။
သို့ သော် တက္ကသိုလ်နှင့် ပတ်သက် သော တကယ့်အဖြစ်အပျက် အကြောင်းအရာ ပြောစရာများ ၊ ကြားချင်သော စကားများ ၊ ဖတ်ချင်သော စာအုပ်များက မူ မပေါ်ထွက်လာခဲ ပေ။
အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းကြောင်း ကြောင့် . တကယ့်ရင်ထဲတွင်ရှိနေသော ဖြစ်ရပ်မှန်အကြောင်းအရာများကို ဖွင့်ပြောဖို့ တွန့် ဆုတ်လျက် ရှိကြသည်။ ဖြစ်ရပ်မှန်တို့ က ရှာပါးလေစွ။
မှတ်မှတ်ရရ . စာရေးဆရာ အောင်ပြည့် ၏ ပြိုမှာလေလား မိုးရဲ့ဟူသော ဦးသန့် အရေးအခင်း နောက်ခံ ကျောင်းသား သပိတ်တိုက်ပွဲ အကြောင်းရေးထားသော စာအုပ်ကိုသာ လက်ညှိုးထိုးပြစရာရှိသည်။ ယခု အချိန်တွင်မူ အဆိုပါ စာအုပ် လည်း ဘယ်လိုမှ ပြန်ရှာ လို့ ရနိုင်မည် မဟုတ်တော့ချေ။
ကျွန်တော်ကတော့ သတ္တိရှိရှိနှင့် ကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့ရသော တက္ကသိုလ် ဆိုသည့် ကျောင်းတော်ကြီးအကြောင်းကို ပြန်လည် ပြောပြချင်ပါသည်။ သို့ သော် . ပဋိပက္ခအရေးအခင်းများ မဟုတ်ပဲ . ခေတ်တစ်ခေတ်၏ တက္ကသိုလ်ပညာရေးကို ထင်ဟပ်စေချင်သည့် သဘောပင်ဖြစ်ပါသည်။ နမူနာ ဆိုပါမူ.. သိပ္ပံ မောင်ဝ ၏ အောက်စဖို့ သွားမှတ်တမ်း ကဲ့သို့ သော စာအုပ်မျိုးကိုပိုကြိူက်မိပါသည်။
တက္ကသိုလ် ဟု ဆိုလိုက်သည်နှင့် ခေတ်ပညာ တတ်တို့ စုဝေးရာအရပ်ဟု နားလည်ကြပါသည်။ ထို့ ပြင် တက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်ကြီးကို ဂုဏ်ပြုချင်သည့် အတွက် ကြောင့် လည်းကောင်း ၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား အဖြစ်ဂုဏ်တင်ချင်သည့်အတွက်ကြောင့် ၄င်း ၊ တက္ကသိုလ် အနုပညာ အသင်း တွင် ပါဝင် ကြသဖြင့် လည်းကောင်း . မိမိတို့ ၏ နာမည် များတွင်( တက္ကသိုလ်) ဆိုသည့် ၀ိသေသ ဘွဲ့ ထူးကို အမြတ်တနိုးထည့်ကြသည်။
မြန်မာ အနုပညာ ၊ စာပေ ၊ ဂီတ နယ်ပယ်တွင် တက္ကသိုလ် ဟုသော စကားလုံး ပါသည့် အနုပညာရှင် စာပေ ပညာရှင် များ မြာက်မြားစွာရှိပေသည်။
သို့ ဆိုလျှင် ကျွန်တော်လည်း မိမိနာမည်ရှေ့ တွင် တက္ကသိုလ် ဟူသော ဘွဲ့ ထူးကိုတော့ထည့်ချင်ပါသည်။ သို့ ပေမယ့် . ခက်တာက ကိုယ်က အများသူငါ လို တက္ကသိုလ် ကျောင်းတော်ကြီးကို လေးနှစ်လေးမိုး ပညာသင်ပြီး ဘွဲ့ ရခဲ့သည် ကျောင်းသားမျိုးတော့ာ မဟုတ်ချေ။ စာပေးစာယူ ဟု လူသိများသည့် အဝေးသင် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား တစ်ဦးသာဖြစ်သည်။ သို့ အတွက် ကျွန်တော် တတ်ခဲ့သော ကျောင်းတော်ကြ၊ီးတွင် တက္ကသိုလ် အနုပညာ အသင်း ဆိုသည်မှာ ဘယ်နေရာတွင် ရှိလို့ရှိမှန်းပင် မသိ ပါ။
ထို့ အပြင် . ပညာသင်နှစ် တစ်နှစ်လုံးတွင် ကျောင်းကို ရောက်သည့် အချိန်ဆိုသည်မှာ လျှေက်လွှာတင်သောနေ့ ရက် နှင့် စာမေးပွဲ ဖြေရန် သင်ကြားပေးသော အနီးကပ် ဆယ်ရက် ဆိုသည့် အချိန်တွင်သာ တက္ကသိုလ် ကို ရောက်ဖူးခဲ့ပါသည်။
သို့ ဖြစ်ပါသောကြောင့် အများသူငါ လို နာမည်ရှေ့ တွင် တက္ကသိုလ် ဟူသော ဘွဲ့ ကို ထည့်ရန်ဝန်လေးမိပါသည်။ သို့ သော် ကိုယ်တိုင်ကလည်း အဝေးသင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့သည့်အတွက် လူအများရှေ့ တွင် ခေတ်ပညာတတ်မှန်း လူအထင်ကြီးအောင်တော့ မပါ . ပါ အောင်ထည့်မိဟု ဆုံးဖြတ်ထားပါသည်။
ထို့ ကြောင့် မိမိနာမည်ကို စဉ်းစားလိုက်သောအခါ အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ဟု ထည့်လျှင်ကောင်းမလား ၊ ဒါလည်း မဖြစ်သေးပါဘူး ။ စာပေး စာယူ ဟု ပြောင်းလျှင်ကော . ဒါလည်း မဟုတ်သေးပါဘူး။ မသိတဲ့လူက ဘာစာတွေ ပေး ပြီး . ဘာ စာတွေ ယူနေမှန်း မသိပဲ နေအုံးမယ်။ ဒီတော့ သေသေချာချာ စဉ်းစားလိုက်ရင် ကိုယ် က ကျောင်းတော်ကြီးနဲ့ ပတ်သက်ခဲ့ဖူးတာ စာမေးပွဲ အနီးကပ် ဆယ်ရက် သာဖြစ်ပေသည်။ ထို့ အတွက် ကြောင့် ကျွန်တော့် ရဲ့ ကလောင်နာမည်လေးကို အားလုံးထက် ထူးခြားသွားအောင် ၊ ကိုယ့်ရဲ့ အဖြစ်အပျက် လေးလည်း ထင်ဟပ်မှူရှိသွားအောင် ဒီလို လေးပဲ ပေးလိုက်မိပါတယ်။
ကလောင်အမည် : မောင်လပြည့် ( တက္ကသိုလ် ဆယ်ရက်)
တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ဘ၀ ဆိုသည့် အတွက် စ နောက်ရယ်မော သံတွေနှင့် အသော ကလေး ဖြစ်ရအောင်ကြိုးစာကြည့်ပါမည်။
University ဟု ဆိုသော တက္ကသိုလ်ဆိုသည့် ကျောင်းတော်ကြီးကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ရာပေါင်းများစွာကတည်းက အနောက်နိုင်ငံတွင် အခြေတကျတည်ရှိခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ အရှေ့ တိုင်းတွင်တော့ တက္ကသိုလ် ဆိုသော စကားလုံးသည် .ရှေးအခါက မင်းညီမင်းသာများ အဌာရသ ၁၈ ရပ် ပညာများ ဆည်းပူသည့် ဒီသာပါမောက္ခ ဆရာကြီး ၏ ကျောင်းတော်ကြီး. တက္ကသီလာ ဆိုသည့်စကားလုံးမှ ဆင်သက်လာပါသည်။
ငယ်စဉ်ကတည်းက တက္ကသိုလ် ဆိုသည့် ကျောင်းတော်ကြီး ကို စိတ်ကူးဖူးသည် ။ အတော့်ကို ပျော်စရာ ကောင်းပြီး ဆွတ်ပျံ့ ကြည်နူးဖွယ်ရာ နေရာ ပင်ဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ် နောက်ခံ ရုပ်ရှင် ၊ ဗွိဒီယို များတွင်လည်း ကြည့်ဖူးသဖြင့် မူလတန်းကျောင်းသာ အရွယ်ကပင် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကြီး ဖြစ်ချင်မိသည်။ အထူးသဖြင့် အတန်းထဲတွင် ဆရာမ က ရိုက်တိုင်း သူငယ်ချင်း အချင်းချင်း က တက္ကသိုလ် ရောက်ရင် အရိုက်မခံ ရတော့ဘူး ကွ ဟု .. အားပေကြသည် ။ ထို့အတွက်လည်း အသားနာ သဖြင့် တက္ကသိုလ် ကို အမြန်ရောက်ချင်မိသည်။
ကျွန်တော် ၏ အမေက တက္ကသိုလ် ဆရာမ ဖြစ်သဖြင့် ကျောင်းဝန်းထဲကို ငယ် စဉ်ကတည်းက ရောက်ဖူးခဲ့သည်။ အင်းလျားကန်ကြီးကို အကြာကြီး ငေးကြည့်ဖူးသည်။ ခုံတန်းပြာကလေးများပေါ်တွင် ဆော့ကစားဖူးသည်။ ဂျပ်ဆင် ထိပ် ကို မော့ကြည့် ဖူးသည်။ သစ်ပုတ်ပင် ကြီးထဲကိုလည်း ၀င် ပုန်း ဖူးသည်။ ထီးကလေး တွေ ကိုယ်စီနှင့် အတွဲ လေးများကို လည်း နှောင့်ယှက်ဖူးသည်။
အမေ လခ ထုတ်ရက်များတွင် တက္ကသိုလ် ကျောင်း ကန်တီး (cantee) တွင်လည်း အားပါးတရ စားသောက် ခဲ့ဖူးသည်။
ကျောင်း ပရိဝုဏ် ထဲတွင်သာ ကြားနိုင်လောက်သည့် ဥသြ ဥသြ .. ဟူသော အသံ လေးသည် လည်း ရင်ထဲတွင် စွဲ၍ကျန်ခဲ့သည်။
ထိုစဉ်ကတည်းက တက္ကသိုလ် ကို ချစ်ခဲ့ပါသည်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ဘ၀ ကို လည်း အားကျမိခဲ့သည။်
ငါလည်း တစ်နေ့ ကျရင် ဒီ တက္ကသိုလ် ကြီးကို ရောက်အောင် လာမယ် ဟော့ ဆိုပြီးရင်ထဲတွင် တိတ်တိတ်ကလေး ကြွေးကြော်မိသည်။
အဖေ နှင့် အမေ လည်း တက္ကသိုလ် ဖူးစာ ဟု ဆိုရပေမည်။ သူတို့ နှစ်ယောက် တွေ့ ရှိသောနေရာသည် ဤ ကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဖြစ်သည် ဟု အမြဲလိုလို ဂုဏ်တင်လေ့ ရှိသည်။
အိမ်ရှေ့ ဧည့်ခန်းတွင် မိဘ နှစ်ပါး ငယ်စဉ် ဘွဲ့ ယူတုန်းက ဓာတ်ပုံ ကို တခမ်းတနား ချိတ်ဆွဲ ထားသည်။ အနက်ရောင်ဝတ်စုံ အနက်ရောင် ခေါင်းစောင်းကြီးများ က မည်သည့် အဓိပ္ပာယ်မှန်းမသိပေမဲ့ ငယ်စဉ်ကတည်းက နားလည် သည်က ဘွဲ့ ယူရင် ဒီလို ၀တ်ရတယ် ဟုသာ သိခဲ့ပါသည်။
အလယ်တန်း ကျောင်းသား ဘ၀ ကို ရောက်တော့ တက္ကသိုလ် နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေ က သိပ်မကောင်းလှ ။ သပိတ်မှောက်ကြလို့ ကျောင်းများ မကြာခဏ ပိတ်လိုက်ရသည် ဟုကြားမိ၏။ တချို့ ကလည်း အသက်တွေသာကြီးသွားတယ်.. ကျောင်းမပြီးလို့ ဘွဲ့ မရကြသေး။
ဒီတော့ . တက္ကသိုလ် ဟူသည့် စကားစု နေရာတွင် . အဝေးသင် တက္ကသိုလ် ဟူသော စကားသံက လှိုင်လှိုင်ကြီး ပေါ်လာသည်။
ကျွန်တော်နားလည် သည် က အဝေးသင် ဆိုတာ ကျောင်းကို နေ့ တိုင်းသွား စရာမလို သော တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ဟု နားလည်ထားပါသည်။
တစ်နှစ်ပြီး တစ်နှစ် ကုန်ဆုံးလာသည်။ တက္ကသိုလ် အကြောင်းကတော့ သတင်းကောင်း ဟူ၍ သိပ်မရှိ။
ငယ်ငယ်တုန်းက အမေ နှင့် လိုက်သွားဖူးသော အလွန်စည်ကား ပြီး ပျော်စရာကောင်းသော တက္ကသိုလ် သည် ယခု အချိန်တွင်တော့ ကျောင်းသားဟူ၍ သိပ်မတွေ့ မိတော့။ အိုဟောင်းနေသော စာသင်ခုံများ ၊ ရေညှိများဖြင့် ဟိုတစ်ကွက် ဒီတစ်ကွက် ဆေးပြယ်နေသော စာသင်ခန်းမ များ က ရော်ရွက်ဝါ များနှင့် အပြိုင် ခြောက်သွေ့ လျက် ။
အထက်တန်း ကျောင်းသား ဘ၀ ဖြစ်ချိန်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် နှင့်အပြိုင် သန်လျင် နှင့် ဒဂုံ မြို့ သစ် တို့ တွင် တက္ကသိုလ် အသစ် နှစ်ခု ပေါ်လာသည်။ ကျွန်တော် တို့ တွေ ရဲ့ ဦတည်ရာသည် အဆိုပါ ကျောင်းသစ်များဆီသို့ ..
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား နောင်တော်ကြီးများ ၏ ငြီးတွားသံ များ ကိုလည်း အမြဲမပြတ်ကြားမိပါသည်။
လယ်ကွင်းပြင် လတာပြင်ကြီးထဲတွင် အရိပ်မဲ့စွာ သွားလာကြရသည်။ မြို့ ပြအိမ်ခြေနှင့် အလှမ်းကွာဝေးသဖြင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲမှူ့ များ ကိုလည်း ကြားမိပါသည်။
ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ ဘာလုပ်ကြမည်နည်း ။
သူငယ်ချင်းများ ၏ သဘောထားအမြင်
အထက်တန်းကျောင်းသား ဘ၀ ကတည်းက တချို့ တွေကတော့ ရည်မှန်းချက် ခိုင်မာသည်။ ဆရာဝန် ၊ အင်ဂျင်နီယာ ၊ စစ်ဗိုလ် စသည့်ဖြင့် ကိုယ်ဝါသနာပါရာ အသီးသီး ။
တချို့ ကတော့ ငယ်စဉ်ကတည်းက အိပ်မက် မက်ခဲ့ရသော Yangon University ဟုခေါ်သည့်တက္ကသိုလ် ကြီးကိုသာ တတ်ရောက်ရန် စိတ်အားထက်သန်လျက်။
ကျွန်တော် တို့ သူငယ်ချင်း တစ်သိုက်လည်း ကိုယ့်ဘ၀ ရှေ့ ရေးအတွက် ဆွေးနွေးကြသည်။
အတန်းထဲမှ သူငယ်ချင်း လှအောင် ကတော့ တက္ကသိုလ် နှင့်ပတ်သက်ပြီး အဆိုးမြင် ၀ါဒရှိသည်။
သူကတော့ တက္ကသိုလ် ကို အထင်မကြီးချင် ။ သူနှင့် စကားပြောလိုက်တိုင်း သူက .
မင်းစဉ်းစား ကြည့် လပြည့် ရာ…. မြန်မာ ရုပ်ရှင် ဗွီဒီယိုတွေ ထဲမှာတွေ့ သလား ၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ဆိုတာ ရည်းစာ ထားဖို့ ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပဲ ရှိတယ်။ ပညာ ကို ဟုတ်တိပတ်တိ ဘယ်လို ကြိုးကြိုးစားစား နဲ့ သင်မလဲ ဆိုတဲ့ ပြကွက် မျိုးတွေ တခါမှ မရှိဘူး ။ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူ ဆိုတာကလည်း အလှပြင်ပြီး လင် ရှာ ဖို့ သက်သက် ကျောင်းကိုလာ နေကြသလို ပဲ နော်။
ပြီတော့ အဆိုးဆုံးကတော့ . အသက် ၄၀ ကျော်အရွယ်ကြီးတွေက လွယ်အိတ်တွေကိုလွယ် ၊ ဟာသ လည်း မဟုတ် ဘရုတ် ကျဖို့ သက်သက် ကျောင်းကိုလာနေကြတာကွ ။ သူတို့ မွေးတဲ့ကလေး တောင် တက္ကသိုလ် တတ်လို့ ရနေပြီ ။ သူတို့ တွေကတော့ ကျောင်းသာ လုပ်နေကြတုန်း ။
နောက်ပြီး ကျောင်းတွေ ကလည်း ဒီနှစ် ပိတ်လိုက် . နောင်နှစ် ဖွင့်လိုက်နဲ့. အဲဒီ ရုပ်ရှင်ထဲက ဇာတ်ဆောင်တွေလို ပဲ အသက် ၄၀ ကျော်မှပဲ ဘွဲ့ ရလိမ့်မယ် ကွ၊။
အနား မှာရှိတဲ့ မြင့်ထွန်း ကတော့ တက္ကသိုလ် ပေါ်ကို တော်တော်လေး အကောင်းမြင်သည်။ ရည်မှန်းချက်လည်း ကြီးမားသည်။ သူ့အမ လည်း ကျွန်တော့် အမေလို ပင် တက္ကသိုလ် နည်းပြ (Tutor) ၀င်လုပ်နေသည် ။
ဒီတော့ . သူက . အဲဒီ ခပ်ပေါပေါ ဗွီဒီယို တွေ ကြည့်ပြီး တက္ကသိုလ် ကိုတော့ အထင်မလွဲပါနဲ့ ကွာ။ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ဆိုတာ က တချိန်တုန်းက အာရှ မှာ နံပါတ် တစ် ပါကွ ။ ငါ့အဖိုး ခေတ် တုန်းက ဆိုရင် . တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ကျောင်းပြီးလို့ သူ့ ရဲ့ဇာတိမြို့ ကို ပြန်ရင် . မြို့ အုပ်မင်း က အစ . သဘောင်္ဆိပ်မှာ လာကြိုရတယ်ကွ ။
ကြိုက်လိုက်တဲ့ ကောင်မလေးတွေ ဆိုတာလည်းဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတာ ။ ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင် နော်။
ဘွဲ့ ရတာနဲ့ . အရာရှိ တန်းဖြစ်တာကွ ။ အရမ်း အားကျဖို့ ကောင်းတယ်။
ငါတို့ အဖေ နဲ့ အမေ ကလည်း တက္ကသိုလ်က ဘွဲ့ ရ ပညာတတ်တွေ ပဲ ။ ငါလည်း တက္ကသိုလ် ကိုတော့ ရောက်အောင် သွားမယ် ကွ ။
သူကတော့ တက္ကသိုလ် ဘက်တော်သား ဖြစ်သည်။
ဒီတော့ . ကျွန်တော်တို့ ဝိုင်းမှာ အမြဲလိုလို စကားနည်းပြီး . ချက်ကျ လက်ကျ ပြောတတ်တဲ့ မင်းမောင် ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းကတော့ ၀င်ထောက်သည်။
အဲဒါ တွေက အရင် တုန်းကပါ ကွာ။ အခုတော့ အဲဒီလို ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မှာနော်။
ငါ တို့ တွေ တက္ကသိုလ် ကိုသွား တာ ဘာ ရည်ရွယ်ချက်လဲ ၊
စာသင်ဖို့ ၊ လူငယ် ဘ၀ ကို ပျော်ပျော်ရွင်ရွင် ဖြတ်သန်းဖို့ . ဟုတ်တယ်နော်။
ငါတို့ က..နိုင်ငံရေး တွေ . ဘာတွေလည်း စိတ်မ၀င်စားဘူး. စာကိုပဲ ကောင်းကောင်းသင်ချင်တာ .
ဒါပေမယ့် လက်တွေ့ မှာတော့ ထင်သလို ဖြစ်ပါ့မလား ။
မင်း တို့ တွေကော တက္ကသိုလ်ဝင်း ထဲကို ရောက်ပြီး ပြီလား ၊ ကျောင်းသား စာသင်ခန်း အဆောင် လူသွားစင်္ကြ ရဲ့ ဘေးတွေ မှာ သံဇကာ တွေ အခိုင်အခံ့ တပ်ထားတယ်ကွ ..
အဲဒါတွေ က ဘာသဘောလဲ ။
ငါတို့ က တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား နော် ၊ သံဇကာ ထဲက လူသားတွေ မဟုတ်ဘူး
မင်းမောင် ၏ အမေး ကို မည်သူ မျှ မဖြေနိုင် ။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း မည်သည့် အဓိပ္ပာယ် မှန်း မသိပါ။ မင်းမောင်သည် သချာင်္ ဥာဏ်ရွှင်သူပီပီ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ဖြေရခက်မည့် မေးခွန်းမျိုးကို မေးတတ်ပေသည်။
( ထို့ ကြောင့် အမေ နှင့် တက္ကသိုလ်ဝင်း ထဲကို လိုက်သွား ပြီး ကြည့်သောအခါ လူသွား စင်္ကြ အချို့ တွင် အဘယ်ကြောင့်မှန်းမသိ . သံဇကာ များအခိုင်အခံ့)
ဤ ပိုစ့်ကို www.roadtoarabian.blogspot.com တွင် အပြည့်အစုံ ရှူရန်
In: ဝတ္ထု Posted By: Zaw Pyae Date: Oct 24, 2010
တခါတုန်းက တက္ကသိုလ်မှာ… မောင်လပြည့် (တက္ကသိုလ် ဆယ်ရက်) PART II
တခါတုန်းက တက္ကသိုလ်မှာ… မောင်လပြည့် (တက္ကသိုလ် ဆယ်ရက်) PART III
တခါတုန်းက တက္ကသိုလ်မှာ… မောင်လပြည့် (တက္ကသိုလ် ဆယ်ရက်) PART V (ဇာတ်သိမ်း)
တခါတုန်းက တက္ကသိုလ်မှာ… မောင်လပြည့် (တက္ကသိုလ် ဆယ်ရက်) PART IV
သစ္စာ (တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်)
Leave comment2Comments & 716 views
ညီလေး လပြည့်ေ၇……..မင်းလို မေ၇းတတ်ပေမယ့် ..မင်းလိုပဲ ခံစားခဲ့၇ပါတယ်…..ဒုတိယ ပိုင်းဘယ်တော့ဖတ်၇မှာလဲကွ…..
By: moehtetarrkar1 at Oct 25, 2010
By: May Kha at Jan 24, 2012